แคมเปญรณรงค์ · Allow aid to IDPs to achieve Peace Process in Myanmar · Change.org
Allow aid to IDPs to achieve Peace Process in Myanmar
Save Idps Myanmar ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน NRPC, ENAC, Minister of Home Affairs
IDPs in Myanmar lack of food and healthcare due to restricted access to humanitarian aid
There are many internal displaced persons (IDPs) in Myanmar because of the ongoing armed conflict between the military and ethnic groups in Kachin and Shan states and the Rohingya in Rakhine State. The total population of IDPs is over 220,000 in 224 IDP camps in Kachin, Shan and Rakhine States. In particular, 52 percent is women and children.
The Myanmar military has restricted access to IDPs in Kachin and Shan States since April 2016 and in Rakhine State since October 2016 for security reasons. As of March 2017, there are still 21 townships in Myanmar with restricted access to IDPs. Asaresult, IDPs do not have enough food, healthcare, clothes and shelter and most children are facing malnutrition.
“The camp provided us with six baskets of rice and Ks 6,000 monthly, but this October 2016 we are down to three baskets of rice and Ks 3,000” said an IDP, Daw Mar Htu of the Kutkai RC IDPs camp in Shan State.
Over half of the population in the IDP camps is women and children. Since Myanmar has ratified the international conventions on Women’s rights and children’s rights, the restriction of access to food and essential aid also shows that the Myanmar government is breaching its duty to protect women and children under international human rights law.
IDPs issues direct affect Myanmar’s Peace Process
Myanmar government has deeply focused on the peace process since 2010 until now. The 21st century Panglong Peace Conference will be held soon for the second time. If the fighting continues, there will be more IDPs and this will further complicate the relationship between the military and the ethnic armed groups, thus interrupting our peace process. Therefore, the issue of IDPs is one of the prime concerns in Myanmar’s peace process.
- The military and the ethnic armed groups to make an agreement to openapassage for humanitarian assistance to pass through conflict areas, internationally known as the Humanitarian Corridor, so that IDPs may receive food and aid to survive.
- The military and the ethnic armed groups to build trust and work together to ensure the passage for humanitarian aid is secure by agreeing to stop fighting near the IDP camps.
- The military and the ethnic armed groups to be willing to let international actors to monitor the delivery of humanitarian aid and ensure the IDPs receive it.
- National Reconciliation and Peace Center (NRPC) and Ethnic Nationalities Affairs Center (ENAC) to publicly demand the government, military and ethnic armed groups to allow the humanitarian aid to IDPs.
After collecting all the signatures, this petition will be delivered to NRPC and ENAC. Peace isanever-ending process; it is an attitude,away of life,away of solving problems and resolving conflicts. We require you to work and live together in peace process in Myanmar.
We will send this Petition to:
Office No.9, Nay Pyi Taw
Lt.Gen Kyaw Swe
Office No.10, Nay Pyi Taw
Secretary of ENAC’s Board Director
Chang Peuak, A-Mueang
Chiang Mai 50302, Thailand
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှု ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များအနေဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မလုံလောက်ခြင်း ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်များသည် အဟာရဓါတ်ချို့တဲ့မှုများ ခံစားနေရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကချင်၊ ရှမ်း နှင့် ရခိုင် စသည့် ပြည်နယ်များတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသာ စစ်ပွဲနှင့်ပဋိပက္ခများကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည့် ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်ဦးရေစုစုပေါင်း ၂၂၀,၀၀၀ (နှစ်သိန်းနှစ်သောင်း) ကျော် ရှိပြီး ယာယီဖွင့်လှစ်ထားသည့် စခန်း ၂၂၄ ခုတွင် နေထိုင်နေကြသည်။ ဒုက္ခသည်ဦးရေ၏ ၅၂%သည် အမျိူးသမီးများ နှင့်ကလေးများဖြစ်ကြသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ လုံခြုံရေးကြောင့်ဟုဆိုကာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များကို ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည် နယ်များတွင် ၂၀၁၆ ဧပြီလမှ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာလတို့မှ စတင်ပြီး ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်မှုများ ပြု လုပ်ထားသည်။ လက်ရှိအချိန် ၂၀၁၇ခုနှစ် မတ်လတွင် ဒုက္ခသည်များရှိသည့် မြို့နယ်ပေါင်း ၂၁ မြို့နယ်တွင် ချူပ်ချယ် ကန့်သတ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ချူပ်ချယ်ကန့်သတ်မှုများကြောင့် ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များသည် စား နပ်ရိက္ခာများ မလုံလောက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု အားနည်းခြင်း၊ အ၀တ်အစားနှင့် နေအိမ်မလုံ လောက်ခြင်း၊ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ အထူးသဖြင့် ကလေးအများစုမှာ အဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။
“လစဉ် အလှူရှင်တွေက ကျွန်မတို့ကို ဆန်(၆)ပုံးနဲ့ ပိုက်ဆံကျပ် (၆)ထောင် ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှစပြီး အထောက်အပံ့ကို ထက်ဝက်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ အခုဆို ဆန် (၃)ပုံးနဲ့ ပိုက်ဆံ ကျပ်(၃)ထောင်ပဲ ထောက်ပံ့တော့တယ်” ဟု ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်ရှိသော ဒုက္ခသည် ဒေါ်မာထူးမှ ပြောခဲ့ပါသည်။
ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်မှာ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးများဖြစ်ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့် ကလေးအခွင့်အရေးစာချုပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်သော ကြောင့် ဒုက္ခသည်များ အထူးသဖြင့် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သော အစားအစာနှင့် အထောက်အပံ့များကို ကန့်သတ်ခြင်း သည် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများကို နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေအရ ကာကွယ်ပေး ရန် ပျက်ကွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်း ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များ အရေးသည် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေခြင်း
၂၀၁၀ခုနှစ်မှ ယခုအချိန်ထိ မြန်မာအစိုးရမှ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် အဓိက အာရုံစူးစိုက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ မကြာမီမှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်၂၁ရာစုပင်လုံငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ စစ်ပွဲ များဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါက ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များ ပိုမိုများပြားလာမည့်အပြင် တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်များအကြား ယုံကြည်မှုပျက်ပြားပြီး ဆက်ဆံရေး ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာကာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံး၏ ငြိမ်း ချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှေ့ဆက်ရန်အတွက် အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း စဉ်အတွက် ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်အရေးသည်အဓိက စိုးရိမ်နေရသောကိစ္စတရပ် ဖြစ်နေပါသည်။
- ပဋိပက္ခဖြစ်သည့် နေရာဒေသများတွင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ အတားအဆီးမရှိ ဖြတ် သန်းသွားလာပို့ဆောင်နိုင်ရန် တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တို့အနေဖြင့် သဘောတူညီမှုရ ယူပြီး နိုင်ငံတကာ အခေါ်အဝေါ်အရ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း (Humanitarian Corridor) ဖွင့် ခွင့်ပြုပေးရန်။ သို့မှသာလျှင် ဒုက္ခသည်များသည် လိုအပ်သောစားနပ်ရိက္ခာနှင့် အထောက်အကူများကိုရရှိ အသက်ရှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်များအတွက် ပို့ဆောင်သည့် အထောက်အပံ့များ လုံခြုံစွာရောက်ရှိရန်အတွက် တပ်မတော် နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့အကြား ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီး ဒုက္ခသည် စခန်းများအနီးတွင် တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်ကြရန် သဘောတူညီမှုရယူရမည်။
- နိုင်ငံတကာမှ အထောက်အပံ့များ ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်များဆီသို့ ရောက်၊ မရောက် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများနှင့် သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ရန် တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များမှ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူ ခွင့်ပြုပေး သင့်ပါသည်။
- အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန(NRPC) နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ စင်တာ (ENAC) တို့မှ အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကို ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်များသို့ နိုင်ငံတ ကာအထောက်အပံ့များကို ကန့်သတ်ချက်မရှိ ခွင့်ပြုပေးရန် အများသိ တရားဝင်စာအနေဖြင့် ထုတ်ပြန်တောင်း ဆိုသင့်ပါသည်။
လုပ်ရှားမှုမှရရှိလာသည့် လက်မှတ်များကို စုစည်းပြီး NRPC နှင့် ENAC အဖွဲ့သို့ ပို့ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြဿနာ များနှင့် ပဋိပက္ခများ ဖြေရှင်းရာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုသည်မှာ မဆုံးနိုင်သည့်ဖြစ်စဉ်တခုဖြစ်သည်။ ဘဝအမြင်၊ ဖြတ် သန်းမှု၊ ပြဿနာများကို အဖြေရှာခြင်းနှင့် ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးတွင် ကျွန်မတို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြရန် တောင်းဆိုချင်ပါသည်။
ဤ Petition ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မျှဝေပေးပါ။
Save Idps กำลังรอให้คุณช่วย
Save Idps Myanmar อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Allow aid to IDPs to achieve Peace Process in Myanmar» คุณสามารถร่วมกับ Save Idps และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 198 คน ได้แล้วตอนนี้เลย